कोरानाले फूल रोप्ने जाँगर चलेन, तिहार खर्च धान्ने कसरी ? « नारी खबर >
कोरानाले फूल रोप्ने जाँगर चलेन, तिहार खर्च धान्ने कसरी ?
ललितपुर– लेलेका महिलालाई यसवर्ष तिहार खर्च धान्नै मुस्किल परेको छ । लेले डिगाउँकी सरस्वती सिलवालको घरआँगनमा यस वर्ष केही बोटमात्र सयपत्री फुलेका देखिन्छन् ।
विगतका वर्ष खेतबारीमा सयपत्री रोपेर व्यापार गर्ने सरस्वतीले यस वर्ष भने त्यो मिहिनेत ठ्याक्कै मारेकी छन् ।
पहिला पहिलाका तिहारमा खुब हर्षले विभिन्न प्रकारका फूलहरु उत्पादन गर्ने, माला बनाएर बजार बिक्री वितरणका लागि लाने गरेको सरस्वतीको भनाइ छ ।
“यो वर्ष कोरोना महामारीको त्रासले कसरी फूलमाला व्यापार गर्ने भन्ने चिन्तासँगै केही रोप्न मन लागेन ।”
सरस्वतीले विगतको तिहारमा एक झुप्पामा पाँचवटा माला बनाएर सानो मालाको रु २५० र ठूलोको रु ४५० माथि बेच्ने गरेको सुनाइन् ।
गत वर्ष सयपत्रीको मालाबाट रु २५ हजार कमाएर भाइमसलालगायत आवश्यक सरदम जुटाएको हुँदा यस तिहारमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने सरस्वतीमा चिन्ता बढेको छ ।
यसैगरी लेले काभ्रेकी मसिनी पौडेल पनि यस वर्ष तरकारीलगायत फलफूल र सयपत्री फूल उत्पादनमा पछि हटेकी छन् ।
विगत वर्ष लेले भञ्ज्याङ हुँदै डोकाका डोका फूलमाला, तरकारी र अनि फलफूल लगेर बिक्रीवितरण गर्ने मसिनीको खेतबारीमा यस वर्ष आएको कोभिडका कारण बाँझोमात्र देख्न सकिन्छ ।
“गत वर्ष सानासाना फूलका गुच्छा बनाएर रु १० हजार फूलबाट मात्र कमाएको थिए । यस वर्ष न बारीमा फूल लगाइयो न दैनिक खान तरकारी नै उत्पादन भयो”, उनले थपिन्।
अघिल्लो वर्ष सयपत्री माला बेचेर मात्रै तिहारमा रु २५ हजार कमाएको सावित्रीले बताइन् । “यसअघिको तिहारमा माला बेचेर आवश्यक सरसामनलगायत देउसी र भैलो खेल्न आउने समेतलाई पैसा दिन अरूसँग हात थाप्नु परेको थिएन ।
यो वर्ष न कुनै काम भयो न तिहारको उत्साह नै छाएको छ ।”
ललितपुरको लेले सयपत्री फूललगायत विभिन्न प्रकारका तरकारी र फलफूल उत्पादनका लागि प्रसिद्ध शहर थियो । यो क्षेत्रका जनताले यस वर्ष केही मात्रामा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र यी वस्तु उत्पादन गरेको बताए ।
गत वर्ष तिहारमा फूलमाला व्यापार गरेर लेलेवासीले लगभग रु ३० देखि ४० लाख भित्र्याएका वडाध्यक्ष मिलन सिलवालले बताए । यस वर्ष व्यापार गर्ने माहोल नरहँदा धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले फूल उत्पादनमा जोड दिएनन्।
केही किसानको बारीमा यस तिहारलाई लक्षित गरेर व्यावसायिक रुपमा रोपिएका सयपत्रीसमेत कसरी व्यापार गराउने भन्ने आफूलाई चिन्ता भइरहेको सिलवालको भनाइ छ ।
गोदावरी नगरपालिका–५ र ६ लेले क्षेत्र पर्छ । यो ललितपुर क्षेत्रको सयपत्री फूल उत्पादन हुने मुख्य थलो मानिन्थ्यो ।
गत वर्षमा लेलेको सयपत्री फूलले चापागाउँ, लगनखेल, जावलाखेल, असनइन्द्रचोक, विशालबजार, दरबारमार्ग, पशुपति अनि गौशाला र चाबहिल क्षेत्रमा खुब भरिभराउ हुन्थे ।